Partners တွဲဖက်အဖွဲ့မျာူ - Ship to Shore Rights
ေ ရေမ ရေမ်ိုဆအမ့်ာလေိုမေသါ်ာ်ေါး်ပ့ (ILO) ထိုဆအမ်ှေါ်ေီာ်ယာ် လာေိုဆတ်ါအမ့်ိုံ်ေေ ပစိုဆှမင် င် ညင် အ ယူ နှင်ေ်ာ်ုဲံ့သသ်ညည ILO သရမှိုလသ်ါဂ္ဂသိုံ်ေါ်အမ်ွဆိုအမှဆိုယမစ်ာလမယမတစမပိုသားစမသရမ်။ ၁၉၁၉ ပိုံမစမှတရမ်ှစေဆို့်၊ လေိုမေ့်မအမံမအမွလေိုမေသါ်ာ်ှဆိုယမစ်ာတဆို့ စရမ့််ိုံ်စိုေေါအမ်ဲေီ် စံ လေိုမေသါ်ာ်ှဆို တရမေ်ှာမ ပါံ်မတမလဆှိုမေါသရမ်။ါ် ထါ တဆိုါ်ှအမွဲေီ် စေီစေ မပါံ်မတမှာေါ်ံဆ်ျသါ်ီ်ံမအမွေါ်ံဆ်ျသာ်ော်လိုံ်တေါ်ှမ သအမွတောမသရမွလေိုမှေိုဆ ထှောမပံော်ေေ်သရမ်။ ပှေံမလှေမါ်ာံ်ထအမေ့်ှာမြှရမွ့့််နမ www.ilo.org ILO သရမ ထဆိုအမ်ံဆိုအမအံတ်ါအမ ပေါ်အမွေေ့်ှဆစစ့်မ်ေဆိုအမ့်ာလိုမေအနမ်ါ်ာံ်ံမအမွတေမသှမ်သ်၍ံမစမေေါအမ်ါ်ာံ်စါ်ာ လိုမေေ်ာအမပပွေါသရမ်။ ( ထ်ေသးအမွှလ်ေလေိုမေသါ်ာ်ံမအမွ လှိုနမှ်၊ေ့့်ေောအမ်လေိုမေသါ်ာ် ပေါ်အမွေေ့်၊ ပ်ါပ ပာ်ှမ်ံ ပအမ်ံမအမွ လ်ါတမလမေစါ်ာသအမ်ါး်ပ့ ပအမ်ံမအမွ ရမဆ်ံအမ်ေ်ါ်ေါံ် ပအမ်) ထဆိုအမ်ံဆိုအမအံ ILO ထအမေ့်ှာမးတမ့့််နမ(www.ilo.org/asia/countries/Thailand လအမွှဆိုထရမွသ်ါအမ်ေါ)
ထဆိုအမ်လေိုမေသါ်ာ်ထနမာှးီ်ဌာန (MOL) သရမ အလ်ုအရနှာနေသူ်ားအား အလ်ုစံ်န့်ွခ မဝန်ဆောင်ေုှးြိ်င်ားနှင်ဲ့ အလ်ုသားလိုအ်ုနေသောသူ်ားအား အလ်ုသား အရနှာဖွှေိဖြသ်ဲ့စွ်ေ်ာ်ုံ့ေုးသသ်ဲ့ လုုိုင်ွင်ဲ့ တာဝန်အရနှိုသသ်ညည်ို့နော် သ်ွေးဝ်းေ်ာင်းင်ြှိင်ဲ့တင်အေရးလေဲ့လာသင်ယူအရန်အတွ် ဆ်သွယ်င်ေုှးြိ်င်းည လူ့အအရင်းအြှိ စ်င်ြှိင်ဲ့တင်းအေရးအတွ် စစ်တ်း င် လေဲ့လာသံးသုြှိ်င်ားနှင်ဲ့ အလ်ုသာှးြို နာ်ာိးု သ တေသနာလုြှိ်င်း ညအလ်ုသာွးာယ်အေရားနှင်ဲ့င် စောင်ဲ့အေရနှာ် မ ဏ္ဍ ည အလ်ုသားအှိငြင်ွးုား မ်ာိးု ဆိုင်းငြှိံ်င်းည အလ်ုအရနှင်ာနှင်ဲ့ အလ်ုသာ်းားအား အသိုသှာိဖြန့်ဝေည သင်တန်ုးို့်ေုးသသ်၊။
အလုားဝန်ြးဌာန လ်အော်ံင် အေေ်င်းစ်ား နှာ
လေိုမေသါ်ာ်စောင်ဲ့အေရနှာ်ွာယ်အေရားနှင်ဲ့ သှမသာပောံအမပံဆေ့်ဌာန
လါ်း လိုံေ့့််ိုံ်
ှဆိုယမစ်ာလမယမလေဆှိုမှံမအမတာဝနမသ်ေစဆတမးတမ့့််နမwww.mol.go.th/en/
MOLံမအမွေ်တ်ါပေ်ာအမ့်ါ်ှမ့်နမစီါ်ှံဆနမ်လ်မေ့်မာ်ါ်သွောပှံမ
၂ထ၁၄ပိုံမစမ လေိုမေသါ်ာ်အေါ်္မစေပဆိုအမ်ါ်ဆိုအမ့်ာစေရမ်ထေ် ၏သံပအမ်တ်ါနမပအမ်သဘော တ ရီ ပှံမှဆို တေရမျေလှမ်ါမတမေ့်ထဆိုပပွေါသရမ်။ (စာါ်ှံမံမာ ၂၉) (စာါ်ှံမံမာ ၂၉ လအမွဂမ)ံမအမွ သှမ်ဆိုအမသောါ် ဘောအမံမအမွါ် ထှါဆို တဆိုါ်မအမွ ပအမ်။
အါ်ါး်မ်လိုမေအနမ်ေးဆရာ မစာပျံမေ သဘောတ ရီါ်တေရမျေလှမ်ါမတမေ့်ထဆို ပအမ်(C.188) ( C.188 လအမွ)ံမအမွ သှမ်ဆိုအမသောါ် ဘောအမံမအမွါ် ထှါဆို တဆိုါ်မအမွ ပအမ်။
စေဆို့်ထနမထ်ါမ်ါ်ာံ်တေါ်ှမသအမတနမ်ေေ်ါ်၏ြှေောအမ်ေ့်ာါ်ာံ် ထ်ေသးအမွ လေိုမေသါ်ာ်ာှးီ်ြှမေါ်၊ အါ်ါး်မ်လိုမေအနမ်ံမအမွအေမလယမစာထိုတမလိုမေါ်လိုမေအနမ်တ်ါအမ အေါ်္မစေပဆိုအမ်ါ်ံမအမွ တ ပာ် လေိုမေသါ်ာ်ပေါ်အမွေေ့်ပံဆ်ျေှးာမါ်စသရမတဆိှု့ဆို ဆေိုါ်ဆိုလ်ါယမှ စါ်ာေားမထိုတမေေ့်ယံဆိုအမ့်နမ်။
ှောအမ်ါ်ါ်နမသောလေိုမေသါ်ာ်ှံအမွစ မ (GLP) စေီစေ မ (GLP ဗါ်ီယဆိုလအမွ)
ဘနမှောမေေ ပစဆှိုမေ့်ာသေါ်ဂ္ဂှဆိုယမစ်ာလမယမသရမှါ်ွောေံမံ့ ၁၄ထံဆိုအမအံနှေမတစမံဆိုအမအံးစမသရမ်။ှဆိုစ်ာလမယမလိုမေဆေိုအမပ်ါအမွတဆို့ါ်မာ ထဆိုအမ်ံမအမွေီ်ယြှော်ံဆိုအမအံေ့်ံမအမွစီ်ေါ်ာ်ေ့် ထှောမပံော်ေေ် ပအမ်၊ေီ်ယာနှင်ဲ့သ်ဆိုင်သော သင်းအ်အလ်ာိးု ရေမသါ်ာံ်သေဆေေ် ပအမ်ံမအမွေီ်ယှရီထှောမွေါံ်စေီ စေ မ၏ လိုမေအနမ် ဝမ်ေဆှိုမးတမ့့််နမ https://eeas.europa.eu/delegations/thailand/2019/about-eu-delgation-thailand_en ဤစီါ်ှံဆနမ်ှဆိုေ့်ာသေါ်ဂ္ဂ်ါမ့်နမေိုံအေါ်ထှောမွေံသရမ်။.
လ်ုငန်းအရနှင်ားအဖွခ့
ထိုင်းနိုင်ငံ လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် (ECOT)
ထိုင်းနိုင်ငံလုပ်ရှင်များအဖွဲ့ကို B.E. 2519 တွင်စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေး အက်ဥပဒေ B.E. 2518 ၏ ပြဋ္ဌာန်းအချက်အတိုင်း ဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအလုပ်ရှင်များ ၏ ကိုယ်စလှယ် လည်းဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သက်တမ်းအရှည်ဆုံး အဖွဲ့ လည်းဖြစ်သည်၊ အချက်အလက်များ ကြည့်ရှူ့ရန် http://ecot.or.th/2016/en/
ထိုင်းထူနားစက်ရုံအသင်း( TTIA) (လင့်ထည့်သွင်း www.thaituna.org/home_en/ )
ထိုင်းအဟာရထုတ်လုပ်မှုအသင်း (TFPA) (လင့်ထည့်သွင်း thaifood.org)
အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့များနှင့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ
စထဲလ်လ မာရိစ်အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ့အနှံ့ ကက်သလစ်ကော်မရှင်ဖြစ်ပြီး လူသားချင်းစာနာ ထောက် ထားမှုနှင့်ငါးဖမ်းလုပ်သားဖူလုံမှုကိုအကူအညီပေးသည်။ အထူးသဖြင့် ပူပင်သောကရောက်သူနှင့် အကူအညီ လိုအပ်သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ စထဲလ်လ မာရိစ်အဖွဲ့သည့် သင်္ဘောသားစင်တာမှ တဆင့် အကူအညီတောင်းခံမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ချွန်ဘူရီတွင် ( စမ်မဲစန်နှင့် စရိရာဇာ)ရယောင်း၊ ပါဌနီပြည်နယ်နှင့် ဗန်ကောက်တွင် ဖွဲ့လှစ်ထားသည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအားလုံးနှင့် ထိုင်းအလုပ်သမားများအားဤစင်တာသို့ကြိုဆိုပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုခံယူခြင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာအကြံပြုရယူခြင်းနှင့် ထိုင်းငါးဖမ်းဥပဒေမှ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန် ဝတ္တရားအကြောင်းလေ့လာသင်ယူခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပြည်သူပိုင်လုပ်ငန်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂ (SERC) သည် ပြည်သူ့ကဏ္ဍတွင် အလုပ် သမားများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဘဏ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်နှင့် ဓာတု၊ စိုက်ပျုးရေး၊အသုံး အဆောင်နှင့် ဝန်ဆာင်မှုကဏ္ဍ။ SERC သည် အလုပ်သမားအခြေခံအခွင့်အရေးကိုတိုက်တွန်းအားပေးပြီးအကာအကွယ်ပေးကာ စုစည်းညီညွတ်ခွင့်၊ အလုပ်သမားအခြေခံအခွင့်အရေးပညာပေးခြင်းကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော် အဖွဲ့ အစည်း နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ကွန်ရက်တို့အကြား သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအလုပ်ဖြစ်ဖို့ တိုက်တွန်းအား ပေးသည်။ SERC သည် ILO အပိုဒ် C.87 လွတ်လပ်စွာသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်စနစ်တကျစီစဉ် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် အပိုဒ် C.98 စည်းရုံးခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပိုင်ခွင့်ပဋိညာဉ် စာချုပ်တို့အပေါ် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းတို့ဆောင်ရွက်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်(ITF) သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ITF သည်သင်္ဘောသား၊ သင်္ဘောပေါ်ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်သား၊ ကုန်းတွင်းပိုင်းငါးဖမ်းလုပ်သား၊ ရထား၊ လေကြောင်း၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားအလုပ်သမားစသည်တို့ကိုယ်စားပြနိုင်သည်။
ရက်(စ်(ထိုင်းဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့( RTF ) ကို ၁၉၉၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင်စတင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ ပြီး အခွင့်အရေးရှူံနိမ့်နေသော့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအား ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် CARE International (Thailand) မှ ဆက်ခံလုပ်ဆောင်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်၊၊ ၀င်ရောက်ရန်www.raksthai.org/en/
လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း (HRDF) သည် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ကောင်စီ အမိန့်နာခံသောပရဟိတအဖြစ် လူ့အခွင့်အရေးပညာရှင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေများဖြင့်၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပရဟိတ၏အဓိကဦးတည်ချက်တစ်ခုမှာ လူအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထောက်ခံအားပေးပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ဥပဒေ ဆိုင်ရာအကူအညီပေးမှုစင်တာနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် hrdfoundation.org
ပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း (FED )သည် အခွင့်အရေးနည်းပါးသောအလုပ် သမားတို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံမှုနှင့်တရားမျှတာမှုရှိရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ လူကြီးများနှင့်ကလေး ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများအတွက်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေသော အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် http://www.ghre.org/en/our-story/
အောက်စ်ဖဲမ်ထိုင်းနိုင်ငံသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လက်တွဲပြီး ဒေသအဆင့်နှင့်အမျိုးသား အဆင့်ဖြင့် အဟာရနှင့်ဝင်ငွေလုံခြုံမှု၏ စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် အထောက်အကူပြုနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးသည် ( ထို့ပြင် လယ်ယာမြေပြုပြင်ပြောင်း လဲခြင်း ၊ သစ်တောနှင့်ကမ်းခြေအရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ကိုသင့်လျော်အောင်စီစဉ်ပေး ခြင်းတို့အတွက် ၂၀၀၁ ကတည်းကစတင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရေရှည်အတွက် အောက်စ်ဖဲမ်ထိုင်းနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ လူ့မှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရာတွင် မမျှတမှုနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကင်းရန် ဆက်လက်လုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားမည်။ Visit https://www.oxfam.org/en/countries/thailand ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းသည် ကျေးလက်ဒေသခံများ၊ အလယ်အလတ်မြို့ပြလူတန်းစားများ၊ အမျိုး သမီးခေါင်းဆောင်နှင့် လူထုအခြေပြုခေါင်းဆောင်းများနှင့် သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ကျင့် သြဇာသက်ရောက် ရန် အခွင့်အရေးမျှတမှု၏အခြေခံသဘောတရားအောက်ရှိ အဖွဲ့ဝင်လှုပ်ရှားမှုများ၏စည်ပင်ကွန်ရက် ကို မြှင့်တင် တိုက်တွန်း ထောက်ခံအားပေးသည်။ ကျေးလက်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ တိုးတက်မှု တည်တံ့ခိုင်မြဲရန် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထောက်ခံအားပေးသည်။ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုရန် www.oxfam.or.th
(MWG) အဖွဲ့သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် တင်ခြင်းအစီအစဉ်မှ အာမခံငွေပေး စနစ်၏ တရားမမျှတမှုကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ လစဉ်အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး သတင်းအချက်အလက်ဖယ်လှယ်ကြခြင်း၊ ပြဿနာများပိုင်းခြားစိစစ်ခြင်း၊ မူဝါဒပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရေးဌာနများ၊ အရပ်သား အဖွဲ့အစည်း(CSOs)များစသည်ဖြင့် သုံးနယ်မြေအဓိက ထားပြီးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံအားပေးရန် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် အလုပ် သမားအခွင့်အရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင်းအရေးတောင်းဆိုနိုင်ခြင်း၊ အခွင့်အ ရေးကာကွယ်မှုရရှိခြင်းနှင့် ဘဝအရည်အတွေးရှိခြင်းနဲ့အတူ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိပဲ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ၏ လေးစားမှုရှိခြင်းစသည်ဖြင့် ဦးတည်ချက်ချမှတ်ထားပါသည်။ ဝင်ရောက်လေ့လာရန် https://mwgthailand.wordpress.com/testimonial/aboutmwg/
သင်္ဘောသားစင်တာနှင့် စထေလ်လ မာရီစ် ချွန်ဘူရီ ပြည်နယ်အတွင်း (စမယ်စန်နှင့် စရီရာချာ) ရယောင်းနှင့်ပါဌနီပြည်နည်၊
SERC : ချွန်ဘုရီနှင့် စုခလာပြည်နယ်အတွင်း အလုပ်သမား အဖွဲ့စုပေါင်းရေးနှင့် အလုပ်သမား စုပေါင်းဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာဖြန့်ဝေခြင်း၊
ရက်(စ်)ထိုင်အဖွဲ့ : စမူဆာခွန်၊ ပါဌနီ၊ စူရတ်ဌာနီ၊ ရနောင်း၊ တရန်နှင့် ချွန်ဖောင်ပြည်နယ်မှ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအသိုင်းအ၀ိုင်းများဖြင့် ကွန်ရက်ချိပ်ဆက်မှုများဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလူငယ်ခေါင်းဆောင်များအကြား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
FED: မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနှင့် ၄င်းတို့မှီခိုသူများအား မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှတဆင့် အသိပညာဖြန့်ဝေခြင်း နှင့် ဖန်ငါပြည်နယ်အတွင်း ပညာရေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ပေးခြင်း၊
HRDF: ဥပဒေဆိုင်ရာလက်ဆွဲ၏တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြင့် အလုပ်သမားပြဿအဓိကထားပြီး လက်ထောက်ရှေ့နေ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာသင်တန်းပေးခြင်းနှင့် အမှုစီမံဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အမှုထပ်ဆင့် ပို့ခြင်းတို့ကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သည်။
MWG: CSOs မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ အမှု မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ထောက်ခံချက်များ၊ ရွှေ့ပြောင်း
အလုပ်သမားဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက် CSOs အဖွဲ့အစည်းအကြားချိပ်ဆက်ခြင်း။